Michael Keating oo dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey bisha Ramadaan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Michael Keating oo dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey bisha Ramadaan
Michael Keating oo dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey bisha Ramadaan
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya danjire Michael Keating, ayaa dadka Soomaaliyeed u diray hambalyo u aadan bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta ay tahay maalintii ugu horeysay.
“Sanadkan, bisha Ramadan waxay ku soo beegantay iyadoo 6.7 malyan oo Soomaali ah oo ay kamid yihiin boqolaal kun oo barakacayaal ah ay u baahanyihiin gargaar bani’aadanimo abaarta darteed. Tani waxay ka dhigeysaa dadaallada lagu xoojinayo nabadda laguna horumarinayo daryeelka ,” ayuu yiri danjire Keating.
“Anigoo ku hadlaya magaca dhammaan bahda Qaramada Midoobay ee ka hawlgasha Soomaaliya, fadlan iga guddooma hambalyadeena ku aaddan bil nabdoon, faa’iido leh oo barakeysan,” ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah Keating.
Previous articleGuddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ah oo Baydhabo gaaray
Next articleWaxqabadka Dawladda ee usbuucii la soo dhaafay “SAWIRRO”